Kedu ohere iji soro backlinks?
N'ikwu okwu n'ozuzu, njikọ inbound bụ URL ọ bụla nọ na saịtị ọzọ karịa nke gị ga-eme ka onye ọrụ laghachi na saịtị gị ma ọ bụrụ na ịpịrị ya. Ntughari backlink na okwu ya bu nchikota okwu nile site na gburugburu weebụ nke na-ezo aka na mpaghara gi. Ịdị mma ma dị mkpa n'ahịa ahịa gị niche nwere ike imeziwanye ebe nrụọrụ weebụ gị ma weta okporo ụzọ ezubere iche maka ibe gị. Ma osụokwu nke na-ejikọta site na ebe nrụọrụ weebụ spammy dara ogbenye bụ ndị na-esoghị ntuziaka Google nwere ike imebi mgbalị nyochacha njirimara gị search engine ma mee ka mbelata na ọkwa.
Dịka nchịkọta Penguin nchịkọta na-adịbeghị anya, a ga-ewepụsịa nkwado ndabere dị iche iche nke na-abịa site na ebe nrụọrụ weebụ spammy, na ebe nrụọrụ weebụ nke ndị na-etinye aka na ọrụ ndị a na-eduhie eduhie ga-adị mkpa - giochi per parco bambini.Google na-ejikwa naanị backlinks ndị na-abịa site na spammy, saịtị ndị dị ala, ihe edere arịlịka egwuregwu, njikọ nchịkọta akụkọ, ma ọ bụ jikọta ugbo.
Ebe ịchọta njikọ inbound dị mma
Nhọrọ free na-enyekarị ndị nwe ụlọ na data ndị na-esonụ - ndepụta nke URL redlink, ihe nkwado nke ndị a backlinks na ikike ikike ha.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị dị njikere ịkwụ ụgwọ maka njikọ ụlọ ọrụ nyocha, mgbe ahụ, a ga-enye gị ọrụ ndị ọzọ na mgbakwunye na usoro ndị dị n'elu: nchịkọta dị mgbagwoju anya na nlezianya zuru ezu, nlekota nkwado azụlinks, nkwụsị nke edere arịlịka na-ezo aka na peeji dị iche iche na saịtị gị, ọkwa maka ihe ọjọọ na-esi na mpụga, njikwa ọtụtụ ikike ndị ọzọ, na na.
E nwere ọtụtụ ọrụ ụlọ ọrụ akwụ ụgwọ na-enye ndị ahịa ha oge ikpe ikpe n'efu (f. e. Ụlọ ọrụ ntanetị na Semalt). Ọ na-enye gị ohere ịlele ogo ọrụ ha ma kpebie ma ọ ga-adọrọ gị mma ma ọ bụ. Ị nwere ike ịhọrọ ọrụ ndị ga-egbo mkpa gị na mmefu ego Ntanye ọrụ ụlọ ọrụ kachasị akwụ ụgwọ nwere ike inye gị ọtụtụ ọnụọgụ bara uru ma mee ka usoro nke ịnweta mma njikọ ihe ọṅụṅụ gị na ngalaba.
Ngwaọrụ ndị ga - enyere gị aka ịdebe backlinks
Ngwaọrụ a na - enye ma ọrụ ego n'efu na ụgwọ. Ọrụ n'efu anaghị ewe oge maka backlinks iji bulie elu. Ọ ga-elele azụ azụ ahịa mbu nke puku ise. Ọ bụrụ na ịchọrọ nyocha nke sara mbara, ị ga-achọ ụzọ ọzọ ị ga-esi hụ akara azụ azụ gị niile. Ọrụ a ga-enye gị ọkwa mbido nke na-agụnye URL nke ibe ebe a debere backlink na saịtị gị, ihe njikọ arịlịka nke njikọ ahụ, metric ndị ọzọ dị ịrịba ama (PageRank na OBL). "All backlinks nke dịpụrụ adịpụ" ọrụ ga-egosi gị saịtị niile na-ezo aka na ngalaba gị ma ọ bụ ọdịnaya. Ọzọkwa, ị nwere ike ịlele ebe ebe akpọtụrụ aha gị.
Ngwaọrụ a na-enyekwa ndị ahịa usoro mmemme. Dịka ọmụmaatụ, ọnwa mbụ nke ụlọ ọrụ njikọ njikọ ga-efu $ 0,99. N'ime ọnwa ikpe a, ị na-enweta ohere ịhọrọ isiokwu dị mkpa maka nkwado SEO, ịmepụta mkpọsa njikọ njikọ, na ịnweta nkwado njikwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwetakwu, ị ga-akwụ $ 99 maka ọnwa ndị na-esonụ. Maka ego a, ị ga - enweta ọrụ dịgasị iche iche nke gụnyere:
Keywords ndepụta njikarịcha na mgbakwunye maka ọganihu ngwa ngwa nke azụmahịa;
Nwelite nkwalite ụlọ ụlọ na-adabere na nsonaazụ rụpụtara na ndepụta nchịkọta ọchụchọ dị mma;
Mmezu nke aro site na akụkọ na idozi ihe niile emehiere na weebụsaịtị.